प्रधानमन्त्रीको जवाफः शेखरजी, कांग्रेसलाई कोइराला, हामीलाई देउवा नै चाहिन्छ - Nepal's Digital News Paper
प्रधानमन्त्रीको जवाफः शेखरजी, कांग्रेसलाई कोइराला, हामीलाई देउवा नै चाहिन्छ
भावी कांग्रेस सभपातिको तिव्र इच्छा बोकेका डा. शेखर कोइराला सहयोग माग्दै विपक्षीसँग पनि पुग्न थालेका छन् । केही समयअघि कोइराला सहयोग माग्दै नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटार पुगेका थिए । तर जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘शेखरजी कांग्रेस र देशलाई कोइराला तर हामीलाई देउवा नै चाहिन्छ ।’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले भावी सभापतिका लागि विपक्षीसँग पनि सहयोग माग्न थालेका छन् । भाइ डा. शशांक कोइराला आए पनि सभापतिमा भिड्ने तयारीमा रहेका शेखर सहयोग माग्दै नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली उपचार गर्न सिंगापुर जानुअघि शेखर बालुवाटार पुगेका थिए । ओली र कोइरालाबीच झन्डै एक घण्टा संवाद भएको थियो । भावी सभापति बन्न सहयोग मागेको कोइरालाले पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीबाट सकारात्मक जवाफ आएको उनले आफूनिकट व्यक्तिसँग बताएका छन् ।
ओलीसँग उनको व्यक्तिगत सम्बन्ध घनिष्ठ छ । भारतको दिल्लीमा १२ वर्षअघि ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा अस्पतालको बेडमा पुगेर भेट्ने नेपाली नेतामा शेखर कोइराला मात्र थिए । ओलीकै पार्टीका कतिपय नेता उनलाई भेट्न दिल्ली गएनन् । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ओलीलाई भेट्न शेखरलाई दिल्ली पठाएका थिए ।
झन्डै तीन साताअघि ओली र शेखरबीचको भेटमा यो प्रसंग पनि उठेको थियो । कोइरालाले कांग्रेसको भावी सभापतिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि ओलीले यही प्रसंग उठाएको स्रोतले बताएको छ । ओलीसँगको भेटमा भएका अधिकांश कुरा उनले आफूनिकट नेतालाई बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शेखरलाई घुमाउरो जवाफ दिएका थिए ।
‘शेखरजी कांग्रेस र देशलाई कोइरालाको नेतृत्व चाहिएको छ तर हामीलाई देउवा नै चाहिन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी र संगठन निर्माणमा कमजोर भएका कारण त्यसको फाइदा आफूहरूलाई पुगेको ओलीले स्पष्ट पारेका थिए ।
यो पनि: कांग्रेस सभापतिमा शशांक आए पनि छाड्दिनँ : डा.शेखर कोइराला
यो पनि: गगन थापालाई कांग्रेस पाँच नेताको फरक-फरक प्रस्तावः मेरो महामन्त्री बनिदिनुहोस्
कांग्रेस सभापति पदका आकांक्षी ६ जना छन् । सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंह छन् । अन्य नेता देश दौडाहामा जुटेका छन् । डा. शेखर देश दौडाहा सकेर विपक्षीसँग सहकार्य खोजिरहेका छन् ।
उनले उमेरका कारण अर्काे महाधिवेशनमा आफू उम्मेदवार बन्न नसक्ने बताएका छन् । उनी ७० वर्ष पुग्न लागेका छन् । अर्काे महाधिवेशनबाट उनी पार्टीको मूल नेतृत्वबाट बिदा लिने तयारीमा छन् । आगामी महाधिवेशनबाट जसरी पनि सभापति बन्ने उनको तयारी छ ।